Ndị Patrons ochie | Li Tim-Oi Foundation
Bishọp KH Ting, Onye isi ala Emeritus, National Christian Council nke China
Li Tim-Oi bụ otu n'ime ndị nsọ nke Chọọchị China, onye ejiri arụmụka na ịgba akaebe arụ ọrụ na ọkụ nke okwukwe. Mee Foundation nke na-aga n’ihu aha ya nyere ụmụ nwanyị ndị ọzọ aka ịgbaso ihe nlereanya ya.
Akwa Bishop Donald Coggan
Ana m ekele Chineke maka ndụ na onye na-agba akaebe Li Tim-Oi - nke kwenyesiri ike, na-agbanwe agbanwe. O nyere ya obi ike na obi ume ala dika ịsụ ụzọ ndị ụkọchụ-aja nke ndị nwanyị na Nzukọ-nsọ. Na ndu ya, o gosiputara na hu ndi nke ya n'anya na] huru ha n'anya rue ogwugwu. Ana m ekpe ekpere ka Li Tim-Oi…
Achịbishọp Robert Runcie
Dị ka Achịbishọp nke Canterbury enwere m ọtụtụ ncheta. N’ime ha, ọ dịghị nke na - emetụ n’ahụ karịa nzukọ mụ na Li Tim-Oi nwere. Ọ bụ otu n'ime ndị dike nke Anglịkan na m ga-enwe ekele mgbe niile na Chineke gọziri anyị site na ozi ya. Ihe kacha masị m bụ otú o si kwụsie ike n’akụkụ Ndị Kraịst ibe ya. Nwere ike ...
Akwa Bishop George Carey
Eji m obi ụtọ nabata ọrụ nke Foundation a na-enyere ụmụ nwanyị aka n'ozi ha maka mkpakọrịta anyị. Site na njem m, ahụla m ihe ụmụ nwanyị na-eme ugbu a maka Alaeze Kraịst gburugburu ụwa, yana ihe ndị ọzọ ha nwere ike ịna-eme na-enyere ha aka.